Sata mifanaraka amin'ny Wayland miaraka amin'ny mpamily Nvidia navoaka | ubunlog
Aaron Plattner, iray amin'ireo mpamorona lehibe ny mpamily NVIDIA, nampahafantatra izany amin'ny alàlan'ny fandefasana ny satan'ny fanohanana protocol Wayland ao amin'ny sampana fitsapana ny mpamily R515, izay nanomezan'ny NVIDIA ny kaody loharano ho an'ny singa kernel rehetra.
Marihina fa any amin’ny faritra maro, fanohanana protocol Wayland amin'ny mpamily NVIDIA mbola tsy nahatratra ny fitoviana amin'ny X11 compatibility. Mandritra izany fotoana izany, ny fahatarana dia noho ny olan'ny mpamily NVIDIA sy ny fetra ankapobeny amin'ny protocol Wayland sy ny server composite mifototra amin'izany.
Misy faritra maromaro izay tsy misy ny mpamily NVIDIA R515 tsy misy fitoviana eo amin'ny X11 sy Wayland. Mety ho noho ny famerana ny mpamily mihitsy, ny protocol Wayland, na ny mpamoron-kira Wayland manokana ampiasaina. Rehefa mandeha ny fotoana, ity lisitra ity dia andrasana hafohezina satria misy fampiasa tsy hita ao amin'ny mpamily sy ny singa ambony, fa ity manaraka ity dia mirakitra ny zava-misy amin'ny famoahana ity dikan-tenin'ny mpamily ity. Mariho fa ity lisitra ity dia mandray compositor miaraka amin'ny fanohanana feno amin'ny fanitarana protocol Wayland mifandraika amin'ny sary.
Ao anatin'ny fetra misy mbola voatonona ireto manaraka ireto:
fitehirizam-boky libvdpau, izay ahafahan'ny mekanika manafaingana ny fitaovana ho an'ny fanodinana horonan-tsary, fampifangaroana, fampisehoana ary decoding, tsy manana fanohanana naorina ho an'ny Wayland. Tsy azo ampiasaina amin'ny Xwayland koa ny tranomboky.
Wayland sy Xwayland dia tsy tohanan'ny tranomboky NvFBC (NVIDIA FrameBuffer Capture) ampiasaina amin'ny fakana sary.
Ny maodely nvidia-drm dia tsy mitatitra ireo endri-pamokarana miovaova toa ny G-Sync, izay manakana azy ireo tsy hampiasaina amin'ny tontolo mifototra amin'ny Wayland.
Amin'ny tontolo iainana any Wayland, Output amin'ny efijery zava-misy virtoaly, ohatra mifanaraka amin'ny sehatra SteamVR, tsy misy noho ny tsy fiasan'ny rafitra DRM Lease, izay manome ny loharanon-karena DRM ilaina mba hamoronana sary stereo misy buffers samihafa.
Xwayland dia tsy manohana ny fanitarana EGL_EXT_platform_x11.
Rehefa mampiasa Wayland dia voafetra ny fampandehanan-draharahan'ny fampiasa nvidia.
Miaraka amin'ny Xwayland amin'ny GLX, tsy mandeha amin'ny buffering indroa ny fanaovana ny buffer vokatra ho eo amin'ny efijery (buffer eo anoloana).
Raha ny momba ny fetran'ny protocol Wayland sy servers composite:
Ny asa toy ny Stereo mivoaka, SLI, Multi-GPU Mosaic, Frame Lock, Genlock, Ny vondrona swap sy ny maodely fampisehoana mandroso (warp, blend, pixel shift, ary YUV420 emulation) dia tsy tohanana amin'ny protocol Wayland na server composite. Raha ny fahitana azy, mba hampiharana ny fiasa toy izany dia ilaina ny mamorona fanitarana EGL vaovao.
Tsy misy API eken'ny besinimaro ahafahan'ny mpizara mitambatra Wayland hamono ny fitadidiana horonan-tsary amin'ny alàlan'ny PCI-Express Runtime D3 (RTD3).
Xwayland tsy ampy ny mekanika azo ampiasaina amin'ny mpamily NVIDIA hampifanaraka ny famandrihana fampiharana sy ny fivoahan'ny efijery. Raha tsy misy ny fampifanarahana toy izany, amin'ny toe-javatra sasany, ny fisehoan'ny fikorontanan'ny maso dia tsy voahilika.
The Wayland Composite Servers tsy manohana ny fampisehoana multiplexers (mux) ampiasaina amin'ny solosaina misy GPU roa (mitambatra sy discrete) mba hampifandraisana mivantana ny GPU discrete amin'ny fampisehoana mitambatra na ivelany. Ao amin'ny X11, ny fampisehoana "mux" dia afaka mifamadika ho azy rehefa mivoaka ny fampiharana amin'ny efijery feno amin'ny alàlan'ny GPU discrete.
Tsy mandeha amin'ny Xwayland ny fandefasana ankolaka amin'ny alàlan'ny GLX, satria tsy mifanaraka amin'ny fampiharana EGL an'ny NVIDIA ny fampiharana maritrano fanamafisam-peo 2D an'i GLAMOR.
Tsy tohanan'ny rindranasa GLX mandeha amin'ny tontolo mifototra Xwayland ny overlay hardware.
Finalmente raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao amin'ny rohy manaraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Navoaka ny sata mifanaraka amin'ny Wayland miaraka amin'ireo mpamily Nvidia